PUNTLAND: Ilaa iyo 3000 Itoobiyaan ah ayaan ka musaafurinay deegaanadeena. + (Ogow Ujeedka) | HalQaran.com
PUNTLAND: Ilaa iyo 3000 Itoobiyaan ah ayaan ka musaafurinay deegaanadeena. + (Ogow Ujeedka)
Garoowe (Halqaran.com) – Maamulka Puntland, ayaa waxa ay sheegeen inay dib u celiyeen Qaxooti Itoobiyaan ah oo ku noolaa deeganada Maamulkaasi, kuwaasi oo gaaraya illaa 3000 ruux.
Hadalkaan ayaa waxaa sheegay Wasiirka Arrimaha gudaha Maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo tilmaamay dalab ka yimid dadkaan in dib loogu celiyay deeganada dalka Itoobiya.
Mudane Dhabancad ayaa sidoo kale sheegay in hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM ay gudaha Puntland dib uga celisay in ka badan 300 boqol oo isla muhaajiriin Ethiopina sida wasiirku sheegay.
Dadkaan dib loo celiyay ayaa u badnaa Oromada degta dalka Itoobiya, kuwaasi oo qaab tahriib ah uga baxa deeganada Maamulka Puntland, islamarkaana u baqoola dhanka Sacuudiga.
Wasiirka Arrimaha gudaha Maamulka Puntland, ayaa sheegay cid waliba oo si sharci daro ah ku soo gasha deeganada Puntland inay ka go,an tahay inay dib u celiyaan, maadaama la ilaalinaayo deganaansha Puntland.
Si kastaba, hawlgalkii lagu qab qaban jiray dadka Oromada ee deeganada Puntland ka socday ayuu sheegay inuu hadda yaraaday, maadaama intii badneyd dadka dib loo celiyay.
itoobiyaan tiro badan
Puntland oo musaafuriyay